बेलायतमा चन्दा, धन्दा र नदिनेलाई पारिने फन्दा ! » नेपाल प्लस
बोजराज / बेलायत
शायद अन्य देशमा जस्तै] बेलायतमा पनि नेपाली डायास्पोरा बीच बेलायतकै स्थानिय र नेपालमा रहेका समुदायलाइ मद्दत गर्नका लागि चन्दा उठाउने चलनले अहिले उग्र रुप लिएको छ । यसरि चन्दा उठाउनेमा व्यक्तिगत देखि संगठित संस्थाहरु जस्तै जातिय र क्षेत्रीय समाज, एन अर एन आदि अग्र पंक्तिमा छन् । हाम्रा नेपाली समुदायका नयाँ पुस्ताले नयाँ तरिका जस्तै म्याराथन दौड आदि गरेर चन्दा संकलन गर्छन भने पुरानो पुस्ताले भोज भतेर गरेर वा च्यारिटी भनेर सोझै पैसा उठाउने काम गरेको देखिन्छ । चन्दा र च्यारिटी भन्ने कुरो निकै राम्रो भए पनि औकात नभएकालाइ वा महत्व नदेखेर नदिनेलाइ फन्दामा पारिनु हुन्न भन्ने मेरो सोच हो ।
व्यक्तिगत हिसाबले भन्न पर्दा म चन्दा “नदिने” पंक्तिमा पर्दछु । मैले एक पैसो दिन पनि त्यसको सार्थकता देख्न पर्छ वा त्यसको वैकल्पिकता देख्न हुन्न । कसैलाई एक किलो मासु दिएर उसलाई परनिर्भर बनाउने पक्षमा म कहिल्यै रहिन । बरु एउटा पाठो व्यक्तिले माग्यो र जतन गरेर पाल्छु अनि आत्मनिर्भर बन्छु भन्यो भने दिन सक्छु । त्यस्तै मैले चन्दा दिन भन्दा उ संग बैकल्पिक उपाय छ भने पनि म दिन्न । सुको पनि दिन्न । आवश्यक नपरेको ठाउँमा चन्दा दिएर मलाइ न त खादा माला नै लगाउन मन पर्छ न कुनै शिलालेख मा नाम लेखाउन । तर सबैले यसै गर्न पर्छ भन्ने मेरो अभिप्राय होइन । तपाईं लाइ जे मन पन पर्छ र औकातले जे ठम्याउन सक्छ सो गर्नु हुन्छ ।
अहिले बेलायतमा एन आर एनको नेपाली घर बनाउने भन्ने प्रसंग सुनिएको छ दशौँ लाख पर्ने गरि नेपाली बीच पैसा उठाएर । बहुसंख्यक नेपाली हरु १२ घन्टे जागिर गर्ने पेशामा रहेर पेट पाल्न मुश्किल परेको बेला त्यस्ता व्यक्तिहरु लाइ यो कामका लागि पैसा दिन पर्यो भनेर अप्ठ्यारो मा पार्न म उचित देख्दिन । शायद एन आर एनले त्यस्तो अवश्य गरेको छैन होला । एन आर एनका प्राय पदाधिकारी साथीहरु ब्यबसायी हुनुहुन्छ होला । अनि उहाँहरुका लागि दुइ चार हजार पाउण्ड केहि नहोला । तर म जस्ता अन्य अवकाश प्राप्त वा १२ घन्टे काम गर्नेहरुका लागि सय पाउण्ड पनि निकै ठूलो कुरा हुन सक्छ ।
मैले माथी नै भनि हालें, विकल्प भएको कुरामा म चन्दा उठाउन जरुरि ठान्दिन । मेरा लागि यो त्यस्तै चिज हो किनकि बेलायतमा समुदायका लागि सरकारले नै हेर्छ । तुरुन्तै नहेर्ला तर केहि समय प्रयास गर्ने हो भने अवश्य हेर्छ । अनि यो कुरा मैले धेरै पहिले देखि नै भन्दै आएको छु । हामीलाइ जे कुरा पनि तातै खाउँ जल्दै मरौं गर्न पर्छ । त्यसो गर्ने हो भने ब्यबसायीहरु जसले नेपाली तथा अन्य समुदायबाट पैसो आर्जन गर्नु हुन्छ तपाईंहरुलेनै गर्दा वेश हुन्छ । तपाईंलेनै तलव दिने मान्छे संग वा म जस्ता निश्चित बजेटमा चल्नपर्ने अवकाश प्राप्त व्यक्तिलाइ दवाव दिनु विवेकपूर्ण हुँदैन । कसैको गोजीमा छ भने उसले जति दिन्छ त्यति लाइ नै आभार व्यक्त गर्नुस । थोरै भनेर धेरैका लागि दवाव नदिनुस् ।
तपाइंको लक्षमा पुग्न सक्नु हुन्न त्यति थोरै चन्दाले भने म्याराथन दौड गर्नुस । सगरमाथा चढ्नुस । ट्रेल वाक गर्नुस । इन्ग्लिश च्यानलमा पौडनुस । छोरा छोरीलाइ विद्यालयमा केक बेच्न भन्नुस वा नेपाली कलाकारले एक पल्ट लगाएका फ्याशन लिलाम गर्नुस । उपाय धेरै छन् र आवश्यक रकम जुटाउनुस । त्यसोगर्दा तपाईं को दायरा विशाल हुन्छ । नेपाली समुदाय बाहिरका ले समेत मदत गर्छन ।
मैले यो किन लेख्यो भनेर तपाईंहरुलाइ खुल्दुली अवश्य लाग्यो होला । मलाइ हिजो मेरा केहि उद्धमी साथीहरुले एन आर एनलाइ चन्दा नदिएकोमा झन्डै झन्डै अप्ठ्यारो मा पार्नु भो । मलाइ जति अप्ठ्यारो पारेपनि मेरो निर्णय फेरिन्न भनेर मैले उहाँहरुलाइ भनें । हामी हाँसेर नै विदा भयौं । एन आर एनमा बेलायतका कैयौं धनाढ्य नेपालीहरु पनि हुनुहुन्छ । उपेन्द्र महतो, शेष घले, जीवा लामिछानेहरु हुनुहुन्छ । अरब र अमेरिका तिरका धनाढ्य नेपालीहरु पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरु कतिले त आफू बसेकै देश केन्द्रित ब्यबसायबाट धनाढ्य बन्न सफल बन्नु भो होला । तर कति चाहिं नेपालीहरु सो ठाउँमा भएर नै, नेपालीहरुलाइ जागिर लगाएर र त्योबाट चुकौनी निकालेर वा नेपालीहरु कै पैसा नेपाल पठाउँदा एक दुइ रुपियाँ निकालेर धनाढ्य बन्नु भएको पनि हुन सक्छ । यदि त्यसो हो भने जाबो एक दुइ मिलियन तपाईंहरुका लागि केहि नहुन सक्छ । त्यो पैसाको थुप्रो स्वर्ग जाँदा लैजान मिल्दैन । बरु त्यस्ता घर तपाईंकै नाममा बनाइदिनुस र घरको नाम नै तपाईं को नाम जस्तै “भोजराज भवन” वा “धन प्रसाद भवन” वा “दान कुमार भवन” राख्नुस । तपाईं को नाम अमर रहनेछ । तर विचरा मुश्किलले जीविकोपार्जन गर्नेहरुलाइ अप्ठ्यारो मा नपार्नुस ।
प्रकाशित मिति: January 17, 2017
You areagreat person that your thinking absolutely matching with my mind. I am totally with you. Aba charity garera paisa uthaune harule pahila yo betha bujhnus ra matra programme garnus yo mero sallaha chha.
कुरा धेरै प्रतिशत सही हो तर नचाहिने ठाउँमा मैले रातो पेनी पनि दिएको छैन । सबैले एन आर एन भन्छन तर मेरो लागी कुन चरा को नाम हो जस्तो लाग्छ । म शेश घले बाहेक अरु लाई पत्याउदिन ।बिदेश मा बसेर नेपालको राजनीति गर्ने लाई त भुसिया कुक्कुर जस्तो पनि लाग्दैन । सक्छ भने जुन देशमा बस्छ त्यही देशमा गरोस त्यस लाई मiन्छु ।